Erdogan: Waxaan Kurdiyiinta Suuriya ka qabsanay magaalada Afrin - BBC News Somali
Erdogan: Waxaan Kurdiyiinta Suuriya ka qabsanay magaalada Afrin
Image caption Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan
"Qeyb kamid ah ah ciidammada xorta ee Suuriya ayaa waxaa ay saaka la waregeen magaalada Afrin" waxaa sidaasi yiri madaxweyne Erdogan.
Howgalka dowladda Turkiga ay ka waday Afrin oo socday muddo laba bil ah ayaa dowladda Turkiga waxaa ay sheegtay inay ooga golleedahay sidii meesha looga saari lahaa Kurdiyiinta Suuriya oo ay dowladdu Turkigu u aqoonsantahay argagixiso.
Tobonaan kun oo qof ayaa ka qaxay halkaasi, waxaana dadka u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka ay sheegayaan in 280 qof oo raydi ah ay ku dhinteen dagaalka Turkiga ee Afrin, inkastoo dowladda Turkigu ay beenisay tiradaasi.
Ciidammada qabsaday Afrin ayaa lagu soo warramayaa inay waddooyinka magaaladaasi ay ku baacsanayaan dagaalamayaasha Kurdiyiinta ee YPG.
Turkiga ayaa kooxda YPG u aqoonsan inay qeyb ka yihiin xisbiga PKK ee laga mamnuucay gudaha Turkiga, kuwaa oo muddo sodon sanno ah u dagaalamayay inay ka go'aan Turkiga intiisa kale.